Mamwe WordPress plugin mukurumbira akaendeswa neako ega kana mutengi-akaisirwa masisitimu. Zvakadini nebhizimisi? Isu taisa pamwechete runyorwa rwe edu anodikanwa plugins ayo isu tinotenda anobatsira WordPress vashandisi vebhizinesi kuti vashandise pane zvavo zvemukati uye kutyaira mhedzisiro kuburikidza neinjini dzekutsvaga uye zvemagariro midhiya, kuburikidza nharembozha, piritsi kana desktop ... uye takanyatso kubatanidza avo ehukama nemavhidhiyo nzira.
Zvandakagadzira mamwe plugins anozivikanwa, ini ndinogara ndine shungu nezvekutsvaga nekugovana plugins dzinoita basa rinoshamisa kusimudzira, kugadzirisa, uye kugadzirisa mabasa mukati meWordPress. WordPress plugins zvese chikomborero uye chituko, zvakadaro.
Pamusoro pezvo, mazhinji e Akanakisa eWordPress plugins Rondedzero yakagadzirirwa blogger yemunhu uye hainyatso tarisa kumabhizinesi uye nekuedza kwavo kwakasarudzika mukugadzira uye kugadzira marongero emukati anobatsira kusimudzira bhizinesi ravo. Pazasi pane yakaedzwa uye yechokwadi seti ye WordPress plugins ebhizinesi iyo yatinotenda ndiyo yakanakisa munzvimbo yakakura yeiyo WordPress plugins.
Iwo Akanakisa eWordPress plugins Ekubata uye Shandura Vashanyi
giravhiti Forms - Inokurumidza uye yakapusa fomu-yekuvaka ine dzakasiyana siyana dzekugadzirisa sarudzo dzinosanganisirwa nyore nevechitatu-bato masevhisi sePayPal, MailChimp, AWeber, nevamwe. Wedzera-ons uye API zviripo zvekusimudzira mashandiro.
Iwo Akanakisa eWordPress plugins Ekuvandudza Yako WordPress Dhivhosi
Iwo Akanakisa eWordPress plugins kuti Simba Izvo Zvemukati Zvako uye Zvayo Reach
Iwo Akanakisa eWordPress plugins Kugadziridza Yako WordPress Saiti
Broken Link Checker - Broken Link Checker monitors uye anoedza ese emukati zvinongedzo & zvekunze zvinongedzo pane yako saiti kutsvaga zvakaputsika zvinongedzo. Izvo zvinobatsira iwe kugadzirisa zvakashata zvinongedzo kugadzirisa SEO uye mushandisi ruzivo
Iyo Yakanakisa WordPress Plugin yeKuki neData Kuteerera
Iwo Akanakisa eWordPress plugins Ekudzivirira Yako WordPress Saiti
VaultPress - Chengetedza zvemukati, madingindira, mapulagini, uye marongero ane realtime backup uye otomatiki chengetedzo pakuvheneka.
WP Chiitiko Chiitiko - Iyo yakazara yakazara WordPress chiitiko loggi plugin yekuchengetedza zvinyorwa zvekushandurwa kwevashandisi, kurerutsa kugadzirisa matambudziko uye kuona hunhu hunokatyamadza kutanga kukanganisa huni hacks.
Ndira 5, 2015 na11: 21 PM
Yakakura runyorwa uye infographic. Semazuva ese, mamwe ekare, avanofarira uye zvimwe zvitsva ini ndichafanirwa kutarisa! Kutenda nekugovana.
Ndira 6, 2015 na1: 53 PM
Ini handina zano rekuti ungati sei chero rino peji rino verengeka? Ini ndaifanira kupuruzira nepakati kuti ndiwane chinhu chekuverenga uye zvanga zvisina kukosha. Kana iwe uchifunga 3/4 peji peji remberi reakajeka mabhatani uye pop up inoramba ichinditsamwisa ndeye bhizimusi kushambadzira, saka iwe warasikirwa nazvo. Ini ndangonetsekana kunyora izvi kuti ndigovane chimwe chinhu newe, sezvawakaita neni. Uye izvo zviri CUT kune CHASE. Ini pamwe chikoro chekare uye webhusaiti tekinoroji iri kunyatsofamba nekumhanya. Asi zvirokwazvo kushambadzira kuchiri nezve kuvaka shamwari dzebhizinesi uye kutsvaga ruzivo kune vako vanokwikwidza? Hazvizondishamise kana ruzhinji rwekuverenga kwako kuri colourblind. Ndiri kuenda nenzira iyoyo.
Kutenda nemhinduro, Steve. Isu tinopa izvo zvirimo pano pasina muripo kwauri uye kuverenga kwedu kwakakwira zvakapetwa kaviri manhamba kwemakore akati wandei. Ini ndinonyanya kuda kuramba ndichishanda ndakanangana nevateveri vedu, vashambadziri vedu, uye vatsigiri vedu. Shuwiro yakanakisa.
Jul 9, 2015 na9: 48 PM
Mhoro Douglas! Inonakidza blog yauinayo pano. Kubatsira kukuru. Ndatenda.
Jul 10, 2015 na12: 21 PM